DBF ပြုပြင်ရေးကိရိယာ DBF Recovery ကို software ကို။ DBF Fix Tool ကို။
DataNumen DBF Repair အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး DBF ကမ္ဘာပေါ်မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ် DBF ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူပါ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen DBF Repair?
မင်းကိုမင်းသိစေချင်တယ် DataNumen DBF Repair ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ACT မှဒေတာအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်! 2000 ဒေတာဘေ့စ။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen DBF Repair v2.9
ဗားရှင်းအားလုံးကိုပံ့ပိုးပါ DBF dBASE III၊ dBASE IV၊ dos အတွက် dBASE 5၊ Windows အတွက် dBASE 5၊ FoxBase၊ FoxPro၊ Visual FoxPro အပါအဝင်အချက်အလက်များ
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု DBF DBT သို့မဟုတ် FPT ဖိုင်များတွင်မှတ်သားထားသောသို့မဟုတ် binary data fields နှင့်အတူဖိုင်များ။
ခွဲဝေရန်ပံ့ပိုးမှု DBF ဖိုင်အရွယ်အစားသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်သောအခါ၊ DBF ဖိုင်များကို။
ယင်း၏ field count ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအများဆုံး field count ကိုရောက်တဲ့အခါဇယားကိုခွဲဖို့အတွက် Support ။
ပြင်ဆင်ရန်ပံ့ပိုးမှု DBF floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်တစ်ခုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု DBF ဖိုင်များကို။
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု DBF ဖိုင်တွဲများကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည် DBF အလွယ်တကူ Windows Explorer ၏ context menu ကိုအတူဖိုင်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen DBF Repair ပျက်စီးသွားသော Recover ရန် DBF ဒတောဘေ့စျ
သင်၏ dBase, FoxBase, FoxPro နှင့် Visual FoxPro databases များ (။dbf ဖိုင်များပျက်စီးသွားပြီ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဖွင့ ်၍ မရပါ၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen DBF Repair စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် dbf ဖိုင်များနှင့်တတ်နိုင်သမျှဖိုင်တွေကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်ရယူပါ။
မှတ်စု: မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ dbf ဖိုင်တွဲ DataNumen DBF Repairကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ပါ dbf ဖိုင်။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုကိုရွေးချယ်ပါ dbf ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည့်ဖိုင်
သင်ထည့်နိုင်သည် dbf ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက် (သို့) ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် ရှာရန် button ကို dbf ဖိုင်ကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်လည်ပြုပြင်ရန်
combo box ထဲမှာ , သင်သည်လည်းအရင်းအမြစ်၏ format ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည် dbf ဖိုင်။ လောလောဆယ်အောက်ပါပုံစံများကိုထောက်ပံ့သည်။
dBASE III ကို
ပုံမှန်အားဖြင့် format ကို "Auto Detect" ဟုသတ်မှတ်သည် DataNumen DBF Repair အရင်းအမြစ်၏ format ကို detect ပါလိမ့်မယ် dbf ရှာဖွေတွေ့ရှိ format နဲ့အညီပုံသေ file နဲ့ output ကို။ အကယ်၍ output file ကိုသင်၏ application မှအောင်မြင်စွာဖွင့ ်၍ မရပါက force for format ကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည် DataNumen DBF Repair သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်လိုက်ဖက်သောပုံစံဖြင့်ဖိုင်ကိုထုတ်လုပ်ရန်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen DBF Repair ပုံသေကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ် dbf ဒေတာဘေ့စ်ကို xxxx_fixed လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဖိုင်အသစ်ထဲကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်။dbfxxxx သည်ရင်းမြစ်၏အမည်ဖြစ်သည် dbf ဖိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရင်းအမြစ်အဘို့ dbf ဖိုင်ပျက်စီးသွားသည်dbfပုံသေသတ်မှတ်ထားသောဖိုင်အတွက်မူရင်းနာမည် Damaged_fixed ဖြစ်လိမ့်မည်။dbf။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen DBF Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း dbf ဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား
အရင်းအမြစ်လျှင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် dbf ဒေတာဘေ့စ်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါပြီ။
ယခုသင်သည်ပုံသေကိုဖွင့်နိုင်သည် dbf သက်ဆိုင်ရာ applications များနှင့်အတူဖိုင်။
DataNumen DBF Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen DBF Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen DBF Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
DataNumen DBF Repair ၃.၂ ကိုမတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ခွဲဝေရန်ပံ့ပိုးမှု DBF ဖိုင်အရွယ်အစားသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်သောအခါဖိုင်ဖြစ်သည်။
Windows Vista ကိုထောက်ပံ့ပါ။
DataNumen DBF Repair 1.5 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
DBT / FPT ဖိုင်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအပေါ်ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုများကိုထည့်ပါ။
DataNumen DBF Repair ၂.၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
binary fields များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ပံ့ပိုးမှု။